Jodaisma rekonstroksionista - Wikipedia
Ny jodaisma rekonstroksionista no firehan'ny jodaisma progresista niforona farany indrindra sady ahitana mpino farany vitsy indrindra. Tamin'ny taona 1968 tao Etazonia no niforonany ka ny raby Mordechai Kaplan no nanorina izany tamin'ny fotokevitra nipoitra tamin'ireo taona 1920 sy 1930 ary 1940. Ao Etazonia sy ao Kanada no tena ahitana ity firehan'ny jodaisma ity.
Ity firehana manaraka toetrandro ity dia mampianatra fa ny jodaisma dia sivilizasiona tsy mitsaha-mivoatra. Tao amin'ny sampana an-kavanana indrindra amin'ny jodaisma mpitahiry, talohan'ny hielezany, no nipoiran'ny jodaisma rekonstroktionista. Nivoatra ilay fihetsiketsehana tamin'ny faramparan'ireo taona 1920 sy 1940 ary 1968 ka nisy ny sekoly rabinika niforona.
Tao amin'io fihetsiketsehana io dia misy fiheverana teolojiaka isan-karazany. Ny Halakha dia tsy heverina ho zavatra tsy maintsy arahina fa ho sisasisan'ny kolontsaina sarobidy tokony hotehirizina, afa-tsy raha misy antony hafa tsy hanaovana izany. Io firehan'ny jodaisma io dia manantitra ny fijery mpomba ny fivoarana manaraka toetrandro sady manolotra fomba fijery ny kolontsaina jiosy nifandovana ikendrena fandraisana fanapahan-kevitra iraisana amin'ny alalan'ny fandaharam-panabeazana sy ny fanadiovana ny loharano jiosy nentim-paharazana.
Sampana sy firehan'ny jodaisma talohaHanova
Sampan'ny jodaisma ankehitrinyHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jodaisma_rekonstroksionista&oldid=973174"
Dernière modification le 22 Aogositra 2019, à 09:48
Voaova farany tamin'ny 22 Aogositra 2019 amin'ny 09:48 ity pejy ity.